आइतबार सेप्टेम्बर 19, 2021 |
आइतबार सेप्टेम्बर 19, 2021
विषय — विषय- सामाग्री
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: हितोपदेश4: 20, 22
“"हे मेरा छोरा, मेरा कुराहरू सुन्। मेरो शिक्षाहरूले तिनीहरूलाई जीवन दिन्छ जसले यसलाई पालन गर्छ अनि मेरा वचनहरूले शरीरमा तन्दूरूस्ती दिन्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: हिब्रू 11: 1-3, 32-35	•	भजनसंग्रह 119: 44, 46
44 हे परमप्रभु, म तपाईंको उपदेशहरू सदा-सर्वदा अनुसरण गर्नेछु।
46 म तपाईंको करारको विषयमा राजाहरूसँग चर्चा गर्नेछु, अनि तिनीहरूले मलाई लज्जित पार्ने छैनन्।
1. भजनसंग्रह 46 : 1-3 (लाई 1st .), 4-6, 10, 11 (लाई 1st.)
1 परमेश्वर हाम्रो बलको भण्डार हुनुहुन्छ। संकटको बेला उहाँबाट हामी सधैं सहयोग पाउन सक्छौं।
2 यसैकारण भुइँचालो आए ता पनि पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा झरे तापनि हामी डराउँदैनौ।
3 हामी भयग्रस्त छैनौं जब समुद्र आँधीले अन्धकार हुँन्छ र पर्वतहरू र्थकिन्छन।
4 त्यहाँ एउटा नदी छ जसको धाराले सर्वोच्च परमेश्वरको पवित्र शहरमा आनन्द ल्याउँछ।
5 परमेश्वर त्यस शहरमा हुनुहुन्छ यसैले यो कहिल्यै नाश हुने छैन। घाम उदाउनु अघिनै परमेश्वर साथ दिन त्यहाँ हुनुहुन्छ।
6 जब परमप्रभु कराउनु हुनेछ अनि पृथ्वी टुक्रिने छ। प्रत्येक जाति डरले काम्ने छन् अनि ती साम्राज्यहरू धराशायी हुनेछन्।
10 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, लडाइँ रोक, म नै परमेश्वर हुँ भनेर जान! म जाति-जातिलाई परास्त गर्नु सक्छु, म संसारलाई अधीनमा राख्न सक्छु!
11 सर्वशक्तिमान् परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। याकूबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ।
2. दानियल3: 1 (लाई:), 4-6, 8,9(लाई 1st ,), 12-14, 16-21, 24-27
1 राजा नबूकदनेस्सरले सुनको मूर्ति बनाए। मूर्ति 60 हात अग्लो अनि6हात चौडा थियो। उनले त्यो मूर्ति बाबेल प्रदेशको दुरा मैदानमा स्थापित गरे।
4 त्यसपछि प्रवक्ताहरूले ठूलो स्वरमा कराएर भने, हे विभिन्न राष्ट्र र विभिन्न भाषाका मानिसहरू ध्यान देऊ।
6 यदि कसैले यो सुनको मूर्तिलाई निहुरेर दण्डवत् गर्दैन अनि पूजा गर्दैन भने त्यस मानिसलाई तुरन्तै दनदन बल्दै गरेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिइनेछ।
9 तिनीहरूले राजा नबूकदनेस्सरलाई भने, हे राजन, तपाईं अमर हुनुहुन्छ।
12 यहाँ केही यस्तो यहूदीहरू छन् जसले तपाईंको यो आदेशलाई पालन गर्दैनन्। तपाईंले ती यहूदीहरूलाई बाबेल प्रदेशमा महत्वपूर्ण हाकिम बनाउनु भएको छ। यिनीहरूको नाउँ यस प्रकार छ शद्रक, मेशक अनि अबेदनगो। यिनीहरूले तपाईंका देवताको पूजा गर्दैनन् अनि जुन सुनको मूर्ति तपाईंले स्थापित गर्नु भएको छ उनीहरू न त त्यस मूर्तिको सामने झुक्छन् न त पूजा नै गर्छन।
18 तर राजा तपाईंले यो जान्नु पर्ने छ, हामी तपाईं को देवताहरूलाई पूजा गर्ने छैनौं अथवा सुनको मूर्तिको अघाडी झुकेर दण्डवत पनि गर्ने छैनौं।
24 त्यस पछि राजा नबूकदनेस्सर छक्क परे र साह्रै उत्तेजित भएर उभिए अनि आफ्ना सल्लाकारहरूलाई भने, के हामीले आगोमा तीन जनालाई बाँधेर हालेको होइनौ?तिनीहरूले उत्तर दिए, हो, अवश्य हो महाराज!
25 तब राजाले भने, तब कसरी म चार जना मानिसहरू खुल्ला भएर आगोमा हिँडको देख्दैछु। त्यो चौथौ मानिस परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ।
26 त्यस पछि नबूकदनेस्सरले त्यस दन्किरहेको भट्टीको ढोका नजिक आएर भने, हे शद्रक, मेशक अनि अबेद्नगो सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, निस्केर आऊ। त्यस पछि शद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट निस्केर आए।
3. भजनसंग्रह 56 : 3, 4
3 जब म भयग्रस्त हुन्छु, तब तपाईंमाथि भरोसा राख्दछु।
5. मत्ती5: 2
6. यूहन्ना6: 63
7. रोमी 8: 1, 2
1. 468 :9(त्यहाँ)-11
त्यहाँ कुनै जीवन, सत्य, बुद्धि, न त पदार्थ मा पदार्थ छ। सबै अनन्त मन र यसको अनन्त अभिव्यक्ति हो, भगवान सबै मा सबै मा हुनुहुन्छ।
आरम्भ देखि अन्त्य सम्म, धर्मशास्त्र मा आत्मा, दिमाग, मामिला को विजय को लेखाहरु भरिएको छ। मोशाले दिमागको शक्ति साबित गरे जसलाई मानिसहरु चमत्कार भन्छन्; यहोशू, एलिया र एलीशाले पनि त्यस्तै गरे। ईसाई युग संकेत र चमत्कार संग शुरू भएको थियो।
3. 335 :7(आत्मा)-15
आत्मा, भगवान, सबै र आफैंमा बनाउनुभएको छ। आत्माले कहिल्यै पदार्थ सृजना गर्नुभएन। आत्मामा केहि पनि छैन जसबाट पदार्थ बनाउन सकिन्छ, किनकि, बाइबलले घोषणा गरे अनुसार, लोगो बिना, ईन वा ईश्वरको वचन, "बनाइएको केहि थिएन।" आत्मा मात्र एक पदार्थ हो, दृश्य र अविभाज्य अनन्त ईश्वर। आध्यात्मिक र शाश्वत कुराहरु पर्याप्त छन्। चीज सामग्री र अस्थायी अपुरो छन्।
मेडिकल स्कूलहरु मन को सट्टा मा पदार्थ बाट मानिस को राज्य जान्नेछन्। उनीहरु फोक्सो, जिब्रो, र नाडी को जाँच गर्न को लागी कती सामञ्जस्य, वा स्वास्थ्य, पदार्थ लाई कुरा गर्न अनुमति दिईरहेछ, - कति दुखाई वा खुशी, कार्य वा स्थिरता, पदार्थ को एक रूप मा पदार्थ को अर्को रूप लाई अनुमति दिईन्छ।
एनाटॉमी स्नायु को लागी मांसपेशिहरु लाई दिमाग को जनादेश व्यक्त गर्न को लागी एक आवश्यकता पाउँछ र यसैले कार्य को कारण; तर के एनाटोमी भन्छ जब कर्ड संकुचन र अचल बन्छ? के नश्वर दिमागले उनीहरुसंग बोल्न छाडेको छ, वा यो उनीहरुलाई नपुंसक हुन को लागी आदेश दिईएको छ? के मांसपेशिहरु, हड्डीहरु, रगत, र तंत्रिकाहरु एक उदाहरण मा मन मा विद्रोह गर्न को लागी अर्को मा छैन, र मानसिक विरोध को बावजूद क्र्याम्प हुन सक्छ?
जब सम्म मांसपेशिहरु सबै समय मा आत्म-अभिनय छन्, उनीहरु कहिल्यै,-मानसिक दिशा को विपरीत अभिनय गर्न को लागी सक्षम छैनन्। यदि मांसपेशिहरु कार्य गर्न र आफ्नो प्राथमिकता को कठोर बन्न सक्दछन्,-विकृत वा सममित हुन, उनीहरु कृपया वा रोग निर्देशन को रूप मा,-उनीहरु स्वयं निर्देशित हुनु पर्छ। तब किन एनाटोमी को सल्लाह लिन को लागी जान्न को लागी कसरी नश्वर दिमाग मांसपेशिहरु लाई शासन गर्दछ, यदि हामी केवल एनाटोमी बाट जान्न को लागी कि मांसपेशी यति शासित छैन?
तपाइँ भन्नुहुन्छ, "मैले मेरो औंला जलाएको छु।" यो एक सटीक कथन हो, तपाइँले सोच्नु भन्दा धेरै सटीक; नश्वर दिमाग को लागी, र केहि फरक पर्दैन, यसलाई जलाउँछ। पवित्र प्रेरणाले दिमागको अवस्था सिर्जना गरेको छ जुन आगोको कार्यलाई शून्य गर्न सक्षम भएको छ, जस्तै तीन युवा हिब्रू कैदीहरुको बाइबिल मा, बेबिलोनी भट्टी मा फ्याँकिन्छ; जबकि एक विपरीत मानसिक स्थिति सहज दहन उत्पादन गर्न सक्छ।
ईसाई विज्ञान को दिव्य मेटाफिजिक्स, गणित मा विधि जस्तै, उल्टो द्वारा नियम साबित हुन्छ। उदाहरण को लागी, सत्य मा कुनै पीडा छैन, र दुख मा कुनै सत्य छैन; मन मा कुनै तंत्रिका, र तंत्रिका मा कुनै मन; दिमागमा कुनै कुरा छैन, र कुनै कुरा मा दिमाग छैन; जीवन मा कुनै कुरा छैन, र कुनै कुरा मा कुनै जीवन; राम्रो मा कुनै कुरा छैन, र कुनै कुरा मा राम्रो छैन।
सत्य र त्रुटि को बीच अनुमानित युद्ध आध्यात्मिक इन्द्रिय को प्रमाण र भौतिक इन्द्रियहरुको गवाही को बीच मात्र मानसिक द्वन्द्व हो, र आत्मा र मांस को बीच यो युद्ध ईश्वरीय प्रेम मा विश्वास र समझ को माध्यम बाट सबै प्रश्नहरुको समाधान हुनेछ।
ईश्वरीय प्रेम, जसले हानिरहित विषाक्त सांप बनायो, जसले मानिसहरुलाई उबलते तेल बाट, आगोको भट्टी बाट, सिंह को जबडा बाट बचायो, हरेक युग मा बिरामी लाई निको पार्न सक्छ र पाप र मृत्यु मा विजय हासिल गर्न सक्छ। यसले येशूको प्रदर्शनलाई अतुलनीय शक्ति र प्रेमको साथ मुकुट लगायो।
अभ्यास मा विज्ञान को नियम बाहिर काम, लेखक दुबै तीव्र र पुरानो रोग को मामला मा स्वास्थ्य को बहाली गरीएको छ तिनीहरुको सबैभन्दा गम्भीर रूप मा। गोप्यता परिवर्तन गरिएको छ, संरचना नवीकरण गरिएको छ, छोटो अगहरु लम्बाईएको छ, एन्क्लाइज्ड जोडिहरु कोमल बनाइएको छ, र क्यारियस हड्डीहरु स्वस्थ अवस्थामा बहाल गरीएको छ। मैले फेफड़ों को हराएको पदार्थ भनिन्छ पुनर्स्थापित गरेको छु, र स्वस्थ संगठनहरु स्थापित भएको छ जहाँ रोग जैविक थियो। क्रिश्चियन साइन्स जैविक रोग लाई पक्कै निको पार्छ किनकि यो निको पार्छ कि कार्यात्मक भनिन्छ, किनकि यो केवल ईसाई विज्ञान को ईश्वरीय सिद्धान्त को उच्च नियम को प्रदर्शन को लागी एक पूर्ण समझ को आवश्यकता छ।
रोग को प्रारम्भिक वा उन्नत चरणहरु लाई अन्धा र शान्त सबमिशन को सट्टा, उनीहरु को बिरूद्ध विद्रोह मा वृद्धि। विश्वासलाई हटाउनुहोस् कि तपाइँ सम्भवतः एक घुसपैठ दुखाइ को मनोरन्जन गर्न सक्नुहुन्छ जुन मन को शक्ति द्वारा इन्कार गर्न सकिदैन, र यस तरीकाले तपाइँ शरीर मा दुखाइ को विकास लाई रोक्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको कुनै कानूनले यो नतिजामा बाधा पुर्याउँदैन।
जब शरीर भन्नु पर्छ, "म बिरामी छु," कहिल्यै दोषी बन्नुहोस्। जब बाट कुरा बोल्न सक्दैन, यो नश्वर दिमाग हुनु पर्छ जो बोल्छ; त्यसैले एक विरोध संग सूचना भेट्नुहोस्। यदि तपाइँ भन्नुहुन्छ, "म बिरामी छु," तपाइँ दोषी हुनुहुन्छ। तब तपाइँको शत्रुले तपाइँलाई न्यायाधीश (नश्वर दिमाग) लाई बुझाउनुहुनेछ, र न्यायाधीशले तपाइँलाई सजाय दिनेछ। रोग आफैलाई केहि घोषणा र यसको नाम घोषणा गर्न को लागी कुनै बुद्धि छैन। नश्वर दिमाग एक्लै आफैलाई वाक्य। यसैले बिरामी संग तपाइँको आफ्नै शर्तहरु बनाउनुहोस्, र मात्र आफैं र अरुको लागी हुनुहोस्।
तपाइँको समझ मा दृढ हुनुहोस् कि दिव्य दिमाग शासन गर्दछ, र विज्ञान मा मानिस भगवान को सरकार प्रतिबिम्बित गर्दछ। कुनै डर छैन कि पदार्थ दुख्न सक्छ, सुन्न सक्छ, र कुनै पनी प्रकारको कानून को परिणाम को रूप मा सूजन हुन सक्छ, जब यो स्वयं स्पष्ट छ कि पदार्थ कुनै दुखाइ वा सूजन हुन सक्छ। तपाइँको शरीर कुनै तनाव वा घाउ बाट पीडित हुदैन रुख को ट्रंक को तुलना मा जुन तपाइँ ग्याश वा बिजुली को तार जो तपाइँ खिच्नुहुन्छ, यो नश्वर दिमाग को लागी थिएन।
मानिस कहिल्यै बिरामी हुँदैन, किनकि मन बिरामी छैन र पदार्थ हुन सक्दैन। झूटा विश्वास दुबै प्रलोभन र परीक्षा, पाप र पापी, रोग र यसको कारण हो। यो रोग मा शान्त हुन राम्रो छ; आशावादी हुन अझै पनी राम्रो छ, तर यो बुझ्न को लागी कि रोग वास्तविक छैन र त्यो सत्य यसको लाग्ने वास्तविकता लाई नष्ट गर्न सक्छ, सबै भन्दा राम्रो छ, यो समझ को लागी सार्वभौमिक र उत्तम उपाय हो।
13. 120 : 11 (सामाग्री)-12
… सामग्री मानिस को लागी कुनै शर्त बनाउन सक्दैन।